Fanosotra holatra - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
menaka37 minitraOlona 4
Nanandrana ity crème ity tamin'ny lovia holatra iray azoko tao an-trano aho ary tena tiako izany. Nomeko mikasika manokana ny resipeo tamin'ny alàlan'ny fanampiana ilay crème crème cranche ary tonga lovia mahazatra antsika io sakafo hariva. Izy io dia fomba fahandro "maivana" mety indrindra ho an'ny sakafo.
Ity fomba fahandro ity dia azo atao mitovy miaraka amin'ny holatra. Miovaova kely ny tsiro fa na izany na tsy izany dia tena matsiro ary ny zanako-vavy dia faly mihinana azy roa. Tsotra ny fanomanana ary fomba hafa hihinanana legioma.
Ity crème ity dia resipeo nitranga tamiko Eva namako. Mpinamana izahay hatramin'ny nanarahan'ny zanakay vavy anay tamin'izahay vao iray volana monja, tao amin'ny làlan'ny fanorana an-jaza sy ny fifanandrifian-javatra tamin'ny fiainana an-tany, nanana ilay zazavavy faharoa izahay na kely aza tamin'izany fotoana izany ary raha tsy ampy dia manana ny zanakay vavy ny anarana mitovy !!
Ka anio no tadiaviko atokana ho azy ity fomba fahandro ity, mandritra ny fotoana rehetra anomezany tanana ahy amin'ity fiainana adin-tsaina izay tanterahiko ity. Misaotra tsara!
1 Fanosotra holatra
Azonao atao koa ny manamboatra an'io crème io amin'ny holatra.
400 g ny holatra na champignons
Tongolo lay 1
Rano 500 g
Apetrakay ao anaty vera ny tongolo, tongolo, tongolo lay ary holatra. Izahay dia nandrovitra Hafainganana 5 segondra 6.
Ampidininay ny sisa tavela amin'ny rindrina amin'ny alàlan'ny spatula. Ampianay ny solika sy ny programa 8 minitra, amin'ny 100º, hafainganam-pandeha 1.
Ampio ny rano, ny goba bouillon ary sira 1/2 sotrokely. Izahay dia manao fandaharana 25 minitra, maripana varoma, hafainganana 1.
Aorian'ny dimy minitra voalohany, esorinay ny kaopy ary apetraho ny harona.
Rehefa vita dia ampianay ny crème maivana, mitahiry sotro fihinanana roa ho haingo sy fandaharana 1 minitra, 90º, hafainganam-pandeha 4.
Ampidininay ny maripanan'ny vera ary potehinay mandritra izany Hafainganam-pandeha 2 minitra 5-10.
Izahay dia manompo sy manao haingon-trano amin'ny ranonorana fanosotra izay notehirizinay.
Fanazavana fanampiny - Fanosotra lasopy holatra
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Salady sy legioma, Tsotra, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny adiny 1, Lasopy sy menaka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Recipe manokana » Celiac » Fanosotra holatra
Akory ny hatsaran'ireny recette maivana ireny ho an'ny sakafo an-trano
Fantatro izay hisakafo hariva izao. Misaotra.
Manantena Perez dia hoy izy:
Mbola tsy nanandrana holatra holatra aho fa tena tsara, ka somary maivana kokoa, apetrako ny antsasaky ny ronono sy ny antsasaky ny crème.
Valiny tamin'i Esperanza Pérez
Tiako ny menaka!
Matsiro tokoa !!
Fa raha tsy misy ny crème dia hitovy ve?
Aleoko tsy ampiana, ny marina, fa na dia kely aza, dia crème foana, ary manamboatra zavatra hafa sy crème aho, manomana ny tsindrin-tsakafo sy ny crème…. Targetan'ny kolesterola AAAAHHHH !! TPT…
Manampia fromazy maivana roa ary mety ho matsiro ihany koa izy io.
Tena manan-karena !!! Azonao atao ve ny manova ny crème amin'ny zavatra mora kokoa toa ny fromazy ??? Ampiasako amin'ny menaka hafa izy ireo, angamba amin'ity iray ity fa tsy amin'ny crème ...
Mazava ho azy Laura, ovao izy fa tsara ihany koa.
Rahoviana ianao no manampy ny boka? Mihevitra aho fa ny tongolo sa zavatra iray fa tsy ny iray hafa? MISAOTRA
Miampy an'i tongolo i Rocio. Misaotra naneho hevitra fa nandalo ahy io.
Pakus, bilaogy kamo dia hoy izy:
Ahoana no itiavako azy. Vao avy namoaka azy io aho tao amin'ny Directo al Paladar, dia fomba fahandro izay tiako be, maivana ary matsiro foana. oroka
Mamaly an'i Pakus, Blog Lazy
Ny marina dia manankarena be. Tsy fantatro izany, raha tsy nampita izany tamiko ity namana ity ary manomana azy matetika aho izao. Oroka
JUAN MANUEL REYES TORRES dia hoy izy:
Salama, vao haingana izahay mivady no nividy TM tanana faha-21, nanoratra anarana aho ary mandefa resipeo amin'ny mailakao tsy tapaka. Te hahafantatra aho raha natao ho an'ny TM 2 na ny TM 21. Ary raha misy fahasamihafana amin'ny ora, ny mari-pana na ny hafainganana. Misaotra betsaka mialoha
Valio amin'i JUAN MANUEL REYES TorrES
Carmen revilla dia hoy izy:
Tamin'ity fahavaratra ity dia nividy ny TM-31 izahay, nalainay izany tamin'ny fialantsasatra ary nahafinaritra anay ny nanao resipeo, ankoatry ny sakafo tsara.
Ankehitriny dia hitako ity pejy ity ary hanomboka hanandramana amin'ilay masinina aho.
Hanombohana dia mila mametraka fanontaniana aminao aho. Amin'ny resipeo sasany, asiana hena, trondro, takelaka misy ron-kena… Matetika aho no mampiasa ron-kena (iray amin'ireo biriky efa amidy vonona), ohatrinona ny ron-kena ampitovina amin'ny takelaka iray?
Valiny tamin'i Carmen Revilla
Carmen, tsy haiko tsara hoe ohatrinona ny ron-kena mitovy amin'ny pilina. Nampiana ireo takelaka fa tsy sira mba hampanan-karena ny sakafontsika.
montsekit dia hoy izy:
Nataoko omaly hariva ity recette ity, ron-kena hena ny pilina satria tsy misy legioma.
Natsiro iny !!! Misaotra betsaka!
Mamaly an'i montsekit
Maripaz dia hoy izy:
Mahafinaritra fotsiny !!!!! Natakaloko holatra vaovao ny holatra ary ny sisa amin'ny fomba fahandro dia mitovy. Nisy olona tokony hohaniko tany an-trano izay tsy dia be fanosotra ary navelany hadio toy izany ny lovia ka zara raha nosasana! Hataoko betsaka ity recette ity !!!!
Valiny tamin'i Maripaz
andrin'ny lavaka dia hoy izy:
Salama, manao ny resipeo aho izao ary mieritreritra aho fa efa nandika an'io resipeo io efa taloha ela be ary ireo akora ireo no boka, fa raha mbola teo am-pamakiana ilay fomba fahandro aho dia tsy nilaza hoe rahoviana no ampiana ilay boka, mbola tsy nasiako izy io ary tsy haiko ny hiafarany ... antenaiko fa tsara ihany koa, toy ny Once, mety ve ny mampihena ny tsiron'ny holatra aorian'ny nanisy crème tamin'ny ronono kely? Ho hitantsika eo ny tsirony: -)
Mamaly andry loaka
Pilar, ny habetsaka dia ampiana amin'ny dingana voalohany, miaraka amin'ny tongolo, tongolo lay ary holatra.
Vao avy nahavita ny recette aho tsy nisy leeks ary ity koa ho an'ny FINGER-LUCK, misaotra betsaka anao momba ilay recette, amin'ny manaraka aho manandrana ny leeks.
Bravo Pilar !!… Tiako ny olona izay manamboatra azy manokana amin'ny fomba fahandro !!
Ireo akora ilaina amin'ny isan'ny olona firy? Hataoko hariva izao hisakafoanana hariva, hotantaraiko izany 🙂
Mamaly an'i judith
Salama Judith, natao ho an'ny olona efatra izy io.
Ny marina dia efa nijery ny bilaoginao hatry ny ela aho, saingy mbola tsy nanomboka nanao recette mihitsy aho, hatramin'ny faran'ny herinandro iny rehefa nanao crème holatra aho ary nilaza ny vadiko fa tena tsara, misaotra betsaka anao nanome anay hevitra hanaovana lovia matsiro sy haingana.
Jesus Ignacio Villalba dia hoy izy:
Manankarena be. MISAOTRA
Valiny tamin'i Jesús Ignacio Villalba
Misaotra Jesosy! Faly be izahay fa tianareo izany. Famihinana.
albus dia hoy izy:
Mahafinaritra! Izaho koa dia nitahiry holatra 4 na 5 teo ho eo, notapahina kely, narotsaka tao anaty vilany mandra-pahatonga azy ireo namboarina ary nanampy crème vinaingitra balsama kely. Tamin'ny farany dia nasiako tamin'ny crème… mmmmmm… mampino !!
Mamaly an'i Albus
Tsara! Misaotra betsaka amin'ny hafatrao. 🙂
Raha amina holatra mangatsiaka no anaovana azy dia mamoaka rano be dia be izy ireo ary tsy dia endasina loatra ny tongolo sy ny boka. Heveriko fa arotsaho aloha ny tongolo sy ny leeks mandritra ny minitra vitsy dia arotsaka ireo holatra, araraka ary avereno averina minitra vitsy alohan'ny hametrahana ny rano sy hanohizana ny fizotrany rehetra.
Akoho tsy misy gluten sy lasagna zucchini
Ovy, karaoty ary lasopy tsaramaso maitso